Iyo inotevera Mashiripiti Khibhodi inogona kuunza kudhirowa kwekiyi neeleki yemagetsi | Ndinobva mac
Iyo yekuvandudza kutenderera kweApple accessories inowanzo kuve yakareba. Rinopfuura rinopfuura gore rapfuura, ivo vakomana kubva kuCupertino vakatanga chizvarwa chechipiri cheMicrosoft Keyboard, iyo Mouse Mouse uye iyo Kubata Pad, chizvarwa chitsva chakanyatso kuunza mashoma kwazvo nhau, kunze kweiyo Kubata Pad. Kuva neApple kuitora zvakadzikama kwazvo zvinoshamisa kutanga kunzwa makuhwa nezvechizvarwa chinotevera chemhando idzi dzezvishongedzo, asi vakatotanga kutenderera. Sekureva kwemumwe mushandisi weReddit, anoenda nezita remadunhurirwa rekuti Foxconninsider, Apple iri kushanda pabhobhodi idzva, keyboard nyowani iyo yaizo shandura zvachose kugadzirwa kweiyi serial kifaa sezvo ichigona kugadzirirwa yakazvimiririra kune yega nyika, pasina kuita shanduro dzakasiyana .
Iyi keyboard inogona kutipa iyo yemagetsi inki skrini pane kiyi dzetsamba, nhamba uye mashandiro ekhibhodi, mabhatani anogona kugadziriswa zvinoenderana nenyika yavakatengeswa. Apple yaisazove yekutanga kambani kuvhura keyboard yerudzi urwuPane kudaro, yaizotaurirana nekambani Sonder, yakasarudzika mune iyi mhando yekhibhodi, iyo inobvumidza kuvhurwa kwekhibhodi nyowani inogadziriswa. Chatisingazive ndechekuti Apple ingatibvumidza sei kumisikidza mamwe makiyi ekuita zvimwe zviito zvakagadzwa nemushandisi izvo zvinotibvumidza kuvhura mashandiro zvakananga.
Sekureva kwemushandisi weReddit, iyo keyboard inogona kusvika kumusika mu2018, zuva repedyo rinotarisa nguva yekuvandudza yerudzi urwu rwechigadzirwa. Asi zvaizove zvakare zvichiri kusabvumidza kupa mwenje pamakiyi, basa rinodiwa zvakanyanya nevashandisi. Chizvarwa chechipiri cheApple Keyboard chinowanikwa muApp Store ye119 euros chiri chakaita sekhibhodi imwechete seyakare yapfuura. Kana Apple ikaburitsa keyboard ine e-ink inoratidzira pane yega kiyi, Ini handitombodi kufunga nezve mutengo iwo waunogona kusvika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Iyo inotevera Mashiripiti Khibhodi inogona kuunza iyo dhizaini yemakiyi neelectric ink
Adobe inoburitsa chekuchengetedza chigamba cheFlash Player paMac